Nei Brazil yakakosha pamisika? | Ehupfumi Zvemari
Mumazuva ano imwe yekutarisisa yemisika yezvemari iri kuBrazil nekuda kwesarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitwa muhupfumi hwekutanga hweLatin America. Kukosha kweiyi nyika yakakura kwakakonzerwa nehuremu hwainayo semumwe wemisika mikuru iri kubuda munyika uye kuti inogona kusvibisa humwe hupfumi yekukosha kwakakosha, senge mune chaicho chiitiko cheArgentina. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei maziso evashambadziri ari kurudzi urwu rwevanopfuura mamirioni zana nemakumi masere vagari.
Sarudzo dzakaburitsa kuti mukwikwidzi wenyika anosvika pakudzoka aine mukana wakakura kupfuura muvengi wake wezvematongerwo enyika. Nekuti zvirokwazvo, ari kurudyi-anoshuvira, Jair Bolsonaro, akawedzera 46,03% yemavhoti anoshanda musarudzo dzakaitwa Svondo ino, izvo zvinomuisa panzvimbo yeanodiwa pachikamu chechipiri chesarudzo chichaitwa Gumiguru 28. Kurwisana nemumiriri wekuruboshwe Fernando Haddad, aimbova meya weSao Paulo uye mukwikwidzi webato rekuruboshwe Workers Party (PT), inotungamirwa naLula da Silva, uyo akawana zvishoma kupfuura 28%.
Kuita kwemisika kunodzikisira kukunda kune wezvematongerwo enyika wezve kurudyi sezvo pakavhotwa kwakawedzera mutsauko muchinangwa, musika weBrazil wemusika wakasimuka, kunyangwe kukwira kwakatenderedza 3% mumazuva pamberi pekuvandudzwa kwesarudzo dzakakosha dzemutungamiri wenyika. Izvi mukuita zvinoreva kuti musika weBrazil wemasheya uri kubheja pamushandirapamwe waJair Bolsonaro, achifungidzira kuti zvinonyanya kukurudzira matanho anotarisirwa nevamiriri vemari venyika yeRio de Janeiro. Kutarisana nekumwe kutya kwehurongwa hwehupfumi uhwo mukwikwidzi akaunza musarudzo idzi.
1 Brazil: inokwira kumusoro mumusika wemasheya
2 Kuvapo kwemakambani eSpain
3 Huremu chaihwo hwehupfumi hweBrazil
4 International ichibuda
5 Pinda kuburikidza nemari yekudyidzana
6 Anoninira chinzvimbo chaBolsonaro
Brazil: inokwira kumusoro mumusika wemasheya
Iyo inonyanya kukoshesa stock index yakakwazisa kukunda kweiye wezvematongerwo enyika ari kurudyi nekuwedzera kukuru. Mupfungwa iyi, mushure mekukunda kwaJair Bolsonaro munharaunda yekutanga yesarudzo neSvondo, São Paulo Stock Exchange yakavhura Muvhuro uno nekusimuka kwakasimba kwe6%: mumaminetsi makumi maviri ekutanga mashandiro, Bovespa indekisi yakange yakamisikidzwa kusvika pamatanho 87.262. Imwe yeanonyanya kushevedzera indices pasi uye nekusiyana kwekutengeserana kwesitoko kwekondinendi yekare yaive ichiendeswa neyakajairika kutengesa nehuremu nezviyero zvehupfumi zvakatorwa muItari.
Indekisi yeBrazil ndiyo Bovespa uye ndeimwe yezvakanyanya kukosha uye inoumbwa nemakambani makumi mashanu akanyorwa pane yakakosha Sao Paulo Stock Exchange. Chero zvazvingaitika, indekisi iyi inoumbwa nemazita emakambani anomiririra 80% yeiyo vhoriyamu yakatengeswa mumwedzi gumi nembiri yapfuura. Inoongororwa makota matatu, kuchengetedza mwero wekumiririrwa kwezvikamu zvese zvinotengeswa mumusika. Kusvika padanho rekuti ndeimwe yeanongedzera nzvimbo kune vashoma nepakati varimi mune ino yakakura geography nzvimbo kune rimwe divi reAtlantic.
Kuvapo kwemakambani eSpain
Chimwe chekurudziro yekutevera misika yemusika weRio de Janeiro mumazuva ano imhaka yekuiswa kwakasimba kwemakambani eSpain munyika ino. Ehe, hazvigone kukanganwika kuti mamwe emakambani makuru, senge, semuenzaniso, BBVA, Santander kana Telefonica, yanga ichishanda kwemakore akati wandei. Saka hazvishamise, nekudaro, kuti varimi vanoteerera zvakanyanya shanduko yeBovespa uye zvese zvinoitika musarudzo dzakasimba dzinoitika muArgentina. Hazvishamise kuti kune zvakawanda zviri panjodzi mazuva ano.
Zvakanaka, hapana chakaderera pane chizere che Makambani makumi maviri nemaviri emusika wekuSpanish wemusika dzinomiririrwa muBrazil, pamwe nemari inofungidzirwa kutorwa inopfuura zviuru makumi maviri emamiriyoni emaeuro. Pakati pavo pane Banco Santander, Telefónica, Iberdrola, Repsol, Endesa, ACS, Ferrovial, Acciona, Mapfre, Amadeus, Dia, Inditex, Indra, Meliá, Naturgy, Técnicas Reunidas, IAG, Viscofan, Nokia Gamesa, Enagas, Cie Automotive uye Grifols. Ndokunge, mamwe emaremu anorema eIbex 35 uye mune chero mamiriro ezvinhu, mazhinji emakambani akakosha kwazvo munyika. saka, icho chinopfuura chikonzero chakaringana chekutarisa kuBrazil mazuva ano.
Huremu chaihwo hwehupfumi hweBrazil
Brazil, hupfumi hukuru muLatin America (iine 40% yeGDP) uye ine huwandu hwevanhu (192 miriyoni vagari) inoramba ichichinja zvine mutsindo, kunyangwe hazvo hupfumi hwenyika hunowanikwa mumucheka wayo unobereka. Naizvozvo, mari yeBrazil yakaratidza a zvakajeka bearish maitiro mumakore achangopfuura. Iine interannual inoderera padyo padyo ne20%. Kusvika padanho rekuti chikamu chakanaka chevamiriri vezvemari chakaodza moyo vatengi vavo kubva mukuita mari yavo munyika ino.
Zvino mushure mesarudzo, zvinoramba zvichionekwa kuti chii chichava Chokwadi kuti equities achatora carioca kana kana zvese zvicharamba zviripo kusvika parizvino. Chero zvazvingava, zvichave zvakafanira kuti uzive kwazvo nezvechirongwa chehupfumi icho mutungamiri mutsva wenyika achapinza kunze. Ichi chichava chiratidzo chakanangana nedungamire inotorwa nemusika wekutengesa kubva zvino zvichienda mberi. Kuti uone kana iri nguva yekupinda mumusika wemasheya kana zvinopesana, iwe unofanirwa kugara sepakutanga. Ndokureva, muzvinzvimbo zvemari yakakwana yekudzora njodzi dzisina basa mukudyara.
Brazil ndeimwe yevamiriri vakakura vehupfumi huri kusimukira kutenderera pasirese nemari yayo, chaiye, inoteverwa zuva nezuva nevatengesi venyika dzese nekuda kwekushomeka kwayo kusingawanzo. Nemuchinjiko unofumura musiyano wakakura kwazvo pakati pemitengo yavo yepamusoro neepasi. Iko kwaunogona kuwana mari yakawanda, asi nekuda kwechikonzero chakafanana njodzi dzakanyanya kukwirira kuti usarasikirwe nemari yakawanda yakaiswa mari. Kunyanya shanduko dzinoitwa zuva rega rega nemari yekureva, rinova iro US dhora.
Nekudaro, imwe yemabhenefiti makuru eiyo Brazilian stock index, iyo Bovespa, ndeyekuti ine yakawanda Kumhanya kwekuwedzera kana maitiro achinja. Mikana yaro yakakura kwazvo nekuti inogona kudzikisira pamusoro pemamwe ma stock indices epasi rese, kusanganisira iyo yeSpanish. Icho chinopfuura chikonzero chakaringana chekukoshesa kupinda munzvimbo munzvimbo ino yakakosha yemari kubva panguva dzino chaidzo. Kunyangwe uchiongorora njodzi dzine mhando idzi dzekushanda dzine.
Pinda kuburikidza nemari yekudyidzana
Chero zvazvingaitika, zano rekudzivirira zvido zvemari diki nepakati nepakati rakavakirwa pakubvumirana mari yekudyara. muzvikwereti zvakavakirwa munzvimbo ino yepasi rose. Kune mari zhinji dziripo munyika ino yeAmerica uye nenzira iyi unogona kusarudza pakati penzira dzakasiyana dzekugadzirisa mari yako. Nekuti haugone kukanganwa panguva ino kuti ino kirasi yezvigadzirwa zvemari inosanganisa akati wandei emari midziyo kuchengetedza mari yevatori vechikamu. Ndokunge, hauzi kuzvifumura iwe zvakananga kuBrazil stock stock sezvaungaita nekutenga uye kutengeswa kwemasheya pamusika wemasheya.
Neiyi nzira, iwe unogona kusanganisa ako ekudyara muBrazil equity nemimwe misika yemasheya, zvese munzvimbo yeAmerica uye mukati mekondinendi yekare. Izvi ndizvo zvaanodaidza kuti kusiyanisa mari panzvimbo yekuchengetedza esese mari yako mune rimwe bhasiketi rekudyara. Uye zvakare, ine mukana wekuti iwe haufanire kugadzira zano rekudyara. Kana zvisiri, pane kudaro, ichave yakapihwa maneja ane ruzivo rwakakura murudzi urwu rwekushanda mumisika yemari. Kupfuura kumwe kufunga kwehunyanzvi uye kusvika iwe uchikwanisa kubva kwakakosha maonero.
Anoninira chinzvimbo chaBolsonaro
Saka kuti iwe uzive nzira yekufambisa mafambiro ako kubva zvino zvichienda mberi, hauzove nesarudzo kunze kwekunge uine mamwe makiyi anoratidzwa nemusika wezvemari weBrazil. Chimwe chakakosha ndechekuti bhizinesi reBrazil uye vezvehupfumi vari chinyararire kukurudzira mukwikwidzi wemutungamiri wenyika kure-kurudyi Jair Bolsonaro kuti akunde zvachose sarudzo dzemutungamiri wenyika muBrazil. Hazvishamise kuti kumwe kutya kukuru kwezvikamu zvakakosha izvi ndechekuti a akasiya hurumende kune hupfumi hukuru muLatin America.
Ichi chinhu chinoshanda mukufarira kuenzana munyika ino kusimuka zvakanyanya mumavhiki anotevera uye pamwe nemwedzi. Icho chinhu chaunogona kutora mukana kuita kuti kuchengetedza kwako kubatsire nenzira inogutsa kwazvo kune zvaunofarira. Kunyangwe ichidzikamisa njodzi nekushanda kwekusawandisa huwandu. Ungofanire kuisa mari kusvika ku20% yeguta guru inowanikwa kuti iise mari yeaya maitiro. Kune rimwe divi, zvingave zvinokurudzirwa kwazvo kuti iwe uise kurasikirwa kwekumira kuitira kuti uchengetedze nzvimbo dzako pane ino chaiyo shanduko uye zvinogona kuitika mumasvondo anotevera.
Imwe nhanho iwe yaunogona kuisa ndeyekusarudza makambani ayo anopa kumwe kuchengetedzeka mumitsara yavo yebhizinesi. Usambofa wakashandura kune mhando dzine hukasha dzinogona kuunza kuderera kukuru mumitengo yavo. Sezvaungaita mukushanda mumisika yenyika. Pasina chero mhando yemisiyano zvine chekuita nechakakosha ichi chikamu mukati mekudyara chikamu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Nei Brazil yakakosha pamisika?